Isahluko 47 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ukuze kukhuliswe abantu empilweni bese kwenziwa ukuthi umuntu Nami sikwazi ukuthola imiphumela ehambisana nenhloso yethu efanayo, bengilokhu ngisitotosa isintu, ngisivumela ukuba sibe nokondleka nempilo ezwini Lami futhi sithole yonke inala Yami kulona. Angikaze ngimnike umuntu okubanga impoxo, kodwa umuntu akayinaki imizwa Yami. Lokhu kungoba isintu asinamuzwa futhi “sedelela” zonke izinto ngaphandle Kwami. Ngenxa yamaphutha esintu, ngiyezwelana naso futhi ngalokho angiyekile ukubelekelela, ukuze bakwazi ukujabulela yonke inala yomhlaba kuze kwaneliseke izinhliziyo zabo esikhathini sabo emhlabeni. Angimphathi ngendlela engafanele umuntu kanti ekucabangeleni abantu abangilandele iminyaka eminingi, ngibe nenhliziyo emnene kubo. Kungathi angikwazi ukukubekezelela ukubeka izandla Zami phezu kwabo ukuba benze umsebenzi wami. Ngakho, ngibukela abantu abazacile abangithandayo ngenkathi bezithanda bona bese enhliziyweni Yami kuba nomuzwa wobuhlungu ongachazeki, kepha ngubani ongephula izimiso ngenxa yalokhu? Ngubani ongaziphazamisa yena ngenxa yalokhu? Noma kunjalo, ngehlisele yonke inala Yami esintwini ukuze sikwazi ukukujabulela ngokuphelele, futhi angisiphathanga isintu ngokungafanele kulolu daba. Yingakho umuntu esabubona ubuso Bami obunothando kanye nomusa. Ngibekezele njalo ngalinda. Ngenkathi umuntu ejabula aze anele bese ekhathala, ngizoqala “ukwanelisa” izicelo zabo ngivumele wonke umuntu ukuba aphunyuke empilweni engenalutho, ngalokho ngeke ngisaphinda ngibasingathe abantu futhi. Emhlabeni, bengike ngamgwinya umuntu ngamanzi olwandle, bengimlawulile ngendlala, ngamesabisa ngobhubhane lwezinambuzane, ngasebenzisa izimvula ezinkulu “ukubachelela”, kodwa umuntu akazange akuzwe ukungabi nalutho kwempilo. Namanje umuntu akakakuqondi ukubaluleka kokuphila emhlabeni. Kungenzeka na ukuthi ukuphila ebukhoneni Bami kuyingxenye ejule kunazo zonke izimiso zempilo yomuntu? Ngabe ukuphila Kimi kumvumela ukuthi aphunyuke engozini yenhlekelele umuntu? Mingaki imizimba yenyama ephile enkululekweni yokujabulela ubuyona emhlabeni? Ngubani ophunyulile kukho ukungabi nalutho kokuphila enyameni? Ngubani futhi obenokukwazi lokhu? Kusukela ekudaleni Kwami umuntu kuze kube manje, akekho noyedwa ophile impilo ebaluleke kunazo zonke emhlabeni, ngakho umuntu ngobuvila ubehlala ephila engabalulekile nhlobo, kodwa akukho noyedwa ozimisele ukuphunyuka kule nkinga futhi akekho ozimisele ukuvika impilo engenalutho nekhatheleyo. Kulokho ahlangabezane nakho umuntu, akukho noyedwa kulabo abaphila enyameni ophunyuke enqubeni yomhlaba womuntu, nakuba benaka kakhulu ukujabulela mina. Esikhundleni salokho, bebehlala bededela imvelo ukuthi ilandele umgudu wayo base bezikhohlisa bona.
Uma sengibuqedile ubukhona bomuntu, akuyukuba khona noyedwa oyosala ukuze abekezelele ukushushiswa wumhlaba, futhi kulapho okuyoshiwo khona ukuthi umsebenzi Wami omkhulu ufeziwe. Ezinsukwini zokugcina lapho ngizobe ngisenyameni khona, engifisa ukukufeza emsebenzini Wami ukuvumela isintu siqonde ukungabi nalutho kokuphila emzimbeni wenyama, ngalokho ngizoyishabalalisa inyama. Emva kwalokho, ngeke kusaba namuntu emhlabeni, akekho noyedwa oyophinda akhale ngokungabi nalutho kwempilo emhlabeni, akukho noyedwa oyokhuluma ngobunzima benyama, akukho noyedwa oyokhononda futhi ngokuthi angiphethe ngokufaneleyo, futhi bonke abantu nezinto bayongena ekuphumuleni. Emva kwalokho, akukho noyedwa oyogijima aye le nale, noma ozofuna lapha nalaphaya emhlabeni ngoba abantu uqobo bazobe sebethole indawo abaphokophelele kuyo. Ngaleso sikhathi, bazomamatheka ebusweni babo. Ngeke ngisacela okungaphezulu kumuntu futhi ngeke ngisaba nengxabano naye; ngeke kusaba khona sivumelwano phakathi kwethu. Ngikhona emhlabeni futhi isintu siphila emhlabeni; ngiphila ngiphinde ngihlale kanye naso. Isintu sizwa ukujabulela ubukhona Bami; ngakho umuntu akazimisele ukuhamba ngaphandle kwesizathu, futhi esikhundleni salokho bafisa sengathi bengingahlala isikhashana eseluliwe. Ngingabekezelela kanjani ukubona izigcawu zosizi ezisemhlabeni ngingephakamise ngisho umunwe ukusiza? Angiyena owomhlaba. Kungokubekezela ukuthi ngisesemhlabeni kuze kube yilolu suku, nakuba lokho ngikwenza nginokungabaza. Ukuba akungenxa yokunxusa kwabantu, ngabe ngahamba kudala. Ezinsukwini zamanje isintu siyakwazi ukuzinakekela futhi asiludingi usizo Lwami ngoba sivuthiwe asidingi ukuthi asondliwe Yimi. Ngalokho ngihlela ukuba nomgubho wokunqoba nesintu, emva kwawo bese ngisivalelisa, ukuze sikwazi lokhu. Vele, ukwehlukana kabi bekungeke kube yinto enhle ngoba akukho zikhalo phakathi kwethu. Ngakho ubungani obuphakathi kwethu buzohlala okokuphela. Ngethemba ukuthi emva kokwehlukana kwethu “ifa” Lami kumuntu lizoqhubeka. Ningakhohlwa yizimfundiso engizethulile ngesikhathi Sami, ningazenzi izinto ezizothunaza igama Lami, futhi nigcine izwi Lami emiqondweni. Ngethemba ukuthi umuntu uzozama ngamandla akhe wonke ukunganelisa uma sengihambile. Ngethemba ukuthi isintu sizolisebenzisa izwi Lami njengesesekelo sempilo yaso. Ningangidumazi ngoba inhliziyo Yami njalo ikhathazekile ngesintu futhi njalo bengixhumene naso. Isintu Nami sake sabuthana ndawonye emhlabeni sajabulela izibusiso ezifanayo nezisezulwini. Ngiphile ndawonye nesintu ngahlala naso, isintu besilokhu singithanda, Nami bengilokhu ngisithanda; sinozwelo komunye nomunye. Uma ngikhumbula isikhathi Sami nesintu, ngikhumbula izinsuku zethu zigcwaliswe ukuhleka nenjabulo, phezu kwalokho, zazikhona izingxabano. Noma kunjalo, uthando phakathi kwethu lwasunguleka kulesi sisekelo akwangahlukana ukusingathana kwethu. Ekuxhumaneni kwethu kweminyaka eminingi, isintu sishiye isithombe esijulile Kimi futhi Nami ngiphe isintu izinto eziningi ukuba sizithokozele, isintu ebesilokhu sikhombisa ukubonga okukhulu. Manje ukuhlangana kwethu akufani nakancane nokwaphambilini; ngubani ongaphuthelwa yilesi sikhathi sokwehlukana kwethu? Umuntu unothando Lwami olujulile, Nami nginothando lwakhe olungapheli, kepha yini engenziwa ngalokho? Ngubani obezoba nesibindi sokuphikisana nezidingo zikaBaba osezulwini? Ngizobuyela endaweni Yami yokuhlala, lapho ngizoqedela khona enye ingxenye yomsebenzi Wami. Mhlawumbe sizoba naso futhi isikhathi sokuhlangana. Kuyithemba Lami ukuthi isintu ngeke sizizwe silusizi kakhulu futhi sizonganelisa emhlabeni; uMoya Wami ezulwini uzoletha umusa kuso.
Esikhathini sokudala, ngangiphrofethe ukuthi ezinsukwini zokugcina ngizokwakha iqembu labantu elizoba nomqondo owodwa nowami. Ngangibikezele ukuthi emva kokusungula isibonelo emhlabeni ezinsukwini zokugcina, ngangizobuya ngize endaweni Yami yokuhlala. Lapho sonke isintu sesinganelisile, sizobe sesizifezile izidingo Zami, ngeke ngisadinga lutho kuso. Esikhundleni salokho, isintu Nami siyoxoxelana izindaba zezinsuku zethu zakudala emva kwalokho siyohlukana. Ngiqala ukwenza lo msebenzi bese ngivumela isintu ukuba sizilungiselele ngokomqondo. Ngizokwenza sonke isintu siqonde izinhloso Zami ukuze kungenzeki singiqonde kabi noma sicabange ukuthi nginonya noma anginanhliziyo, okungeyona inhloso Yami. Ngabe isintu siyangithanda nokho siyenqaba ukungidedela ngibe nendawo efanele yokuphumula? Ngabe isintu asizimisele ukucela uBaba osezulwini enzela Mina? Ngabe umuntu akakaze achithe izinyembezi zokuzwelana Nami? Asisizanga na isintu ekufezeni umhlangano ophuthumayo Kithi singuBaba neNdodana? Kungani singazimisele manje? Umsebenzi Wami emhlabeni usufeziwe futhi emva kokwehlukana nesintu ngizoqhubeka nokusiza isintu, akukuhle lokhu? Ukuze umsebenzi Wami ube nomphumela omkhudlwana futhi ukuze usize ndawo zombili, kufanele sehlukane nakuba kubuhlungu ukukwenza. Izinyembezi zethu zizowa buthule ngingabe ngisasithethisa isintu. Esikhathini esedlule, ngisho izinto eziningi eziyihlabile inhliziyo yesintu uqobo, zenza ukuthi sikhiphe izinyembezi zosizi. Ngalokho, ngiyaxolisa esintwini futhi ngicela ukuba isintu singithethelele; ningangifisi futhi ningangizondi ngokuba konke engikushilo bekuhlose ubuhle besintu. Ngakho ngethemba ukuthi isintu sizoyiqonda inhliziyo yami. Ezikhathini ezedlule sibe nengxabano, kodwa uma kubhekwa emuva, sobabili sizuzile. Kulezi zingxabano uNkulunkulu nesintu babe nebhuloho lobungane elakheke phakathi kwabo, akuzona lezo izithelo zemizamo yokusebenzisana kwethu? Kumele sonke sikujabulele lokhu. Ngicela umuntu ukuthi awathethelele “amaphutha” Ami akuqala kanti neziphambeko zomuntu nazo zizokhohlakala. Uma nje umuntu ekwazile ukubuyisa uthando Lwami ngesikhathi esizayo, lokho kuzoletha ukunethezeka eMoyeni Wami ezulwini. Angazi ukuthi isinqumo somuntu siyini kulokhu, ukuthi umuntu uzimisele yini ukufeza isicelo Sami sokugcina noma cha. Angiceli lutho olunye kumuntu, kuphela ukuthi angithande, futhi lokho kwanele. Kungenzeka lokhu na? Mazedlule zonke izinto ezingemnandi ezenzeke phakathi kwethu esikhathini esedlule, makube nothando njalo phakathi kwethu. Nginikile umuntu uthando olukhulu kangaka kumuntu, nomuntu ukhokhe kakhulu kangaka ukungithanda. Ngakho ngethemba ukuthi isintu siyalwazisa uthando oluqinile futhi olungenasici phakathi kwethu ukuze uthando lwethu lwedlulele emhlabeni womuntu luphinde lwehlele phansi okokuphela. Uma siphinda sihlangana, masiphinde sihlanganiswe wuthando ukuze uthando lwethu luqhubekele ekuphileni kwaphakade futhi ludunyiswe luxoxwe yibo bonke abantu. Lokhu kuyonganelisa ngiphinde ngiveze ubuso Bami obumamathekayo esintwini. Ngethemba ukuthi umuntu uzokukhumbula konke engikubeke kuye.
uNhlangulana 1, 1992
Okulandelayo: Isahluko 1
Umsebenzi kanye nokungena kwenu akukuhle neze; umuntu akagxili kakhulu endleleni yokusebenza futhi unokungacopheleli nakakhulu mayelana...